डा. केसी अधिवक्ताको जिम्मामा तारेखमा रिहा «
डा. केसी अधिवक्ताको जिम्मामा तारेखमा रिहा
सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसी तारेखमा रिहा भएका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतले केसीको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै उनको तर्फबाट बहसमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको जिम्मामा छोडी बाँकी कारबाही गर्न आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा बयानका क्रममा डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि लगाएको आरोपबारे अध्ययन गर्न उनको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि झिकाउन पनि भनिएको छ । ‘अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘गोपाल पराजुलीको नामको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएका दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउनुका साथै न्यायपरिषद्बाट उमेरका सम्बन्धमा भएको निर्णय तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपीसमेत झिकाउनू ।’
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहितको इजलासले आईओएमको डिनमा डा. शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न दिएको आदेशको मिसिल पनि पेश गर्न आदेश गरिएको छ । अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै केसीविरुद्ध रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनलाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । मंगलबार बयान नसकिएपछि उनलाई बुधबार पनि अदालत झिकाइएको थियो । रिहा भएपछि डा.केसीले अदालतको आदेश स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।